ဖင်လန်နေတဲ့ ဝတ္ထု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Short Story » ဖင်လန်နေတဲ့ ဝတ္ထု	18
Posted by Thint Aye Yeik on Jan 25, 2016 in Short Story | 18 comments
A သူသည် A ဆိုသော အမည်ဖြင့် Bank ကြီးတစ်ခု၏ မန်နေဂျာချုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည်။
အလုပ် အင်မတန်များသော သူ့ကို သည်နေ့မနက် တွေ့ခွင့်မှ မရလျှင် ဘဏ်ကို မီးရှို့ပြာချပစ်တော့မလို
အသည်းအသန်ဖြစ်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဘဏ်ထဲရောက်နေကြောင်း သတင်းလာပို့သောအခါ…
သို့သော် ထိုအမျိုးသမီးသည် အရေးကြီးသော အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခု ရှိ၍သာ ဤမျှတောင်းဆိုသမှု ပြုခြင်းဖြစ်မည်ဟု တွေးမိပြီး…
သူ…ထိုအမျိုးသမီးနှင့် တွေ့ဆုံဖို့ လက်ခံလိုက်သည်။
B အမျိုးသမီးသည် အသက်ခပ်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီး B ဟူသည့်အမည်ရှိ… အတန်ငယ်အူတိအူကြောင်နိုင်သူသာ ဖြစ်သည်။
B ဆိုသည့် အမျိုးသမီးကြီးသည် A ၏ ရုံးခန်းထဲ ဝင်လျှင်ဝင်ချင်းမှာပင်.. Aကို စိမ်းစိမ်းကြီး ကြည့်ပြီး…
”ရှင် …မနက်ဖြန်ရောက်ရင်… ရှင့်တင်ပါးမှာ ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးမှာ မဟုတ်လား” ဟု ပြောလေသည်။
A သည် ရုတ်တရက်တော့ ကြောင်တိကြောင်တာ ဖြစ်သွားပြီး နောက်… ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်ချလိုက်မိသည်။
ဘယ်နှယ်…ဒီမိန်းမကြီးက…တစ်ထစ်ချ လာပြောနေတာ… ပေါက်တီးပေါက်ကရတွေ… ဟု တွေးပြီး..
”ကျုပ်က ဘာလို့ တင်ပါးမှာ တက်တူးထိုးရမှာတုန်းဗျ ။ ဘယ်တော့မှ မထိုးဘူး ။ ” ဟု အသေအချာ ပြန် ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
B ကလည်း မလျှော့ရေးချ မလျှော့ချေ။
B = ”ရှင့်တင်ပါးမှာ တက်တူး ထိုးကို ထိုးမှာပါ.. ။ မနက်ဖြန်မှာ ရှင် ထိုးကို ထိုးလိမ့်မယ်..။”
A = ”လုံးဝ မထိုးဘူး။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က မထိုးဘူးဆိုရင်… ခင်ဗျားက ပိုသေချာအုန်းမှာလား..”
B =” သေချာပါတယ်…ရှင် မနက်ဖြန် တက်တူး ထိုးကို ထိုးမှာ… ။ ဘာပုံ ထိုးမလဲ ဆိုတာတောင် ပြောပြနိုင်သေးတယ်။”
A =” အောင်မာ… ကဲ…ပြောပါအုန်း…ဘာပုံ ထိုးမယ်လို့ အတတ်ပြောနိုင်တာတုန်း…”
B = ”နဂါးပုံ ထိုးမှာလေ… ဒါပေမယ့် တက်တူးဆရာခပ်ညံ့ညံ့နဲ့ တွေ့ပြီး..နဂါးပုံမပေါက်ပဲ… အာပြဲခြောက်ပုံစံပဲ ထွက်လာမှာ…”
A =” ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ… လုံးဝ လုံးဝ အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ နိမိတ်ဖက်စကားပဲ… ။ ကိုင်း… ခင်ဗျားဘက်ကလည်း… ကျုပ်တက်တူးထိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာ
သေချာပေါက် လာပြောနေတယ်… ကျုပ်ဘက်ကလည်း မထိုးဘူးဆိုတာ သေချာနေတယ်။ ဒီတော့… အလောင်းအစားလုပ်မလား..”
B = ”စိန်လိုက်လေ…လောင်းမယ်။ ရှင် မနက်ဖြန် ရှင့်တင်ပါးမှာ တက်တူး ထိုးကို ထိုးမှာ ။”
A = ”တကယ်လို့ ကျုပ်မထိုးရင်… ကျုပ်ကို သိန်းတစ်ရာ ပေးရမယ်…”
B =” ပေးမယ်.. ။ တကယ်လို့ မနက်ဖြန် ရှင့်တင်ပါးမှာ ရှင်…တက်တူးထိုးမိတယ်ဆိုရင် ကျွန်မကို သိန်းတစ်ရာ ပေးရမယ်။”
A = ”အိုကေ… ။ သန်ဘက်ခါ မနက်ကျရင်..ခင်ဗျား ငွေသိန်းတစ်ရာ ယူပြီး ဒီကို လာခဲ့.. ။”
B =” ကောင်းပြီ။ ကျွန်မ လာရင် ရှင် သိန်းတစ်ရာ ပေးဖို့ အသင့်ပြင်ထား။”
C B နှင့် အလောင်းအစားလုပ်ထားမိသည့်နောက်… A သည် သူ၏တင်ပါးတွင် တက်တူးမထိုးမိအောင် နေရသည်။
သိပ်တော့ အပန်းမကြီးပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ တင်ပါးမှာ တက်တူးထိုးဖို့ ဆန္ဒလည်း မရှိ။
အလောင်းအစားလုပ်လိုက်သည်မှာလည်း A ဘက်က 100% သေချာနေ၍သာ ဖြစ်သည်။
သည်နေ့မနက်… ဟိုအမျိုးသမီးကြီး လာလိမ့်မည်။ သူမထံမှ ငွေ သိန်းတစ်ရာ ရမည်။ သေချာပါသည်။
.ဟော…ပြောရင်းဆိုရင်း…B ဆိုသည့် အမျိုးသမီးကြီး လာလေပြီ။
သို့သော် B နှင့်အတူ… နောက်ထပ် အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက် ပါလာသည်။
A က… ဆီးကြို၍ ပြောလိုက်သည်။
A = ”ကိုင်း…ခင်ဗျား ရှုံးပြီ။”
B =” သေချာလို့လား.. ။ ကျွန်မ ရှုံး မရှုံး သေချာဖို့.. ရှင့် တင်ပါးကို ပြဖို့ လိုတယ်..”
အင်း..သိန်းတစ်ရာ ရမှာပဲ… တင်ပါးကို ပြရတာ တန်ပါတယ်.. ။ ချွတ်ပြလိုက်ရုံပ…
A = ”ရတယ်လေ… ။ ဒီမှာကြည့် …”
A က … သိန်းတစ်ရာ မြန်မြန်ရရင် ပြီးရော ဆိုပြီး… တင်ပါးကို ချွတ်ပြလိုက်ရာ…
B ရော… B နှင့် အတူပါလာသော C ဆိုသည့် အမျိုးသားကပါ… သေချာ ကြည့်ကြသည်… ။
A က…တင်ပါးချွတ်ပြပြီးသည်နှင့်… ပေး…. သိန်းတစ်ရာ ဟု…တောင်းဆိုလိုက်သည်။
B က .. A ကိုတော့…”အေး ပေးရမှာပေါ့.. ”ဆိုကာ ..
C ဘက်ကို လှည့်ပြီး.. ”တွေ့တယ်မဟုတ်လား.. သူ တင်ပါးလှန်ပြတယ်”ဟု ပြောလိုက်သည်။
C က… သူ့နဖူးသူ လက်ဝါးနှင့်ဖြောင်းခနဲရိုက်လိုက်ပြီး…”.သေရော… ကျုပ်ရှုံးပါပြီ…”ဟု အော်ကာ…
အဆင်သင့်ပါလာသည့် အိတ်အတွင်းမှ… ငွေ သိန်း ၂ရာကို B အား … ထုတ်ပေးလေတော့သည်။
B က.. C ပေးသော ငွေ သိန်း၂ရာထဲမှ တစ်ဝက်ခွဲပြီး သိန်းတစ်ရာကို ဘက်ခနဲပစ်ကာ Aအား မဆိုင်းမတွ ပေးလေသည်။
< C ကတော့… သိန်းနှစ်ရာ ပေးပြီးသည်နှင့်… စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ကာ..ခေါင်းတခါခါလုပ်ပြီး..အပြင်ပြေးထွက်သွားတော့သည်။ >
သို့သော်… B နှင့် C ကို သိပ် မသင်္ကာသဖြင့် A က အကျိုးအကြောင်း မေးမိသည်။
A = ”ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့က ဟိုငွေ သိန်းနှစ်ရာနဲ့ ဘာတွေ အပေးအယူလုပ်ကြတာဒုန်း”
B = ”ဒီလိုရှင့် C နဲ့ ကျွန်မ.. အလောင်းအစားတစ်ခု လုပ်ထားတယ်။ ဘဏ်မန်နေဂျာချုပ်ကြီးက တင်ပါးလှန်ပြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ပြောတာကို
C က မယုံဘူးလေ.. ရှင့်လိုလူက ဘာအကြောင်းနဲ့မှ… ကျွန်မတို့ကို တင်ပါးလှန်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြန်ငြင်းနေလို့ သိန်းနှစ်ရာကြေး လောင်းလိုက်တာ…။
အခုတော့ C ရှုံးသွားပြီ..။”
(ဟာသတစ်ပုဒ်ကို ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ် ပြန်ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။)
ခင်ဇော် says: အဟိဟိဟိ။
ခုတလော ပုံပြင်တွေ အရမ်းပြောနေတယ်နော်။
သင့်အရိပ် says: ———————
ဒါနဲ့… မမဂျီး ကွန်မန့်ပေးပြီးတာနဲ့… အနီ ပေးမယ့်သူက အဆင်သင့်နော့…
နာ ကွန်မန့်ပေးပြီးတာနဲ့…နီက…အနီပေး…ဆိုပြီး… တပါတည်း..ခေါ်လာတာလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: မမဂျီးကို အရမ်းရမ်းချစ်ပြီး မက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေသူတွေပေါ့ကွယ်။
သင့်အရိပ် says: အချိန်ပေးပြီး.. ထိုင် နီ ပေးတဲ့သူတွေမို့…
ရဲရဲကြီးသား ယုံလိုက်စမ်းပါ…မမဂျီးရာ… Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဖတ်ဖူးတယ်
သင့်အရိပ် says: ဖင်ကန်တာ ဘာလို့ ဖုန်စင်တာဒုန်းဗျ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဖိနပ်မစီးလို့ပေါ့ဟဲ့
သင့်အရိပ် says: Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: နေအူးး
နာ အလုပ်မှာ လကုန်ခါနီး တိုင်ပတ်နေလို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
သင့်အရိပ် says: .နီနဲ့နာလည်း အလောင်းအစားလေးတစ်ခု လုပ်ရအောင်…
နီဟာဆိုရင်ဖြင့်…. လှလှတွေ ပြင်ဆင်ခြယ်သလိုက်ရင်… တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံနဲ့ တူသွားပြီး…
နာဟာဆိုရင်ဖြင့်… ပလိန်းလေးနေတာကိုက အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာ…
မှန် မမှန်… စစ်တမ်းကောက်ပြီး လောင်းမား..
Kaung Kin Pyar says: နေဦး
သင့်အရိပ် says: .ဖြစ်ရလေ… ဂွမ်းပုံရယ်…အဲလေ.. ဖြစ်ရလေ..ဝိုင်းစိန်ရယ်…
လုံမလေးမွန်မွန် says: အေးဆို . . ပိုင်ချက် . . .
အိုင်ဒီယာလေးကောင်းတော့ တစ်ခါတည်း သိန်းတစ်ရာ ရသွားရော . .
သင့်အရိပ် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: စု တု ပြုပေါ့
သင့်အရိပ် says: စု ကို တု ပြီး ပြု ရင်ကော…
uncle gyi says: ဒါမျုိုးတော့လာမလောင်းနဲ့သိပြီးသား